जीवन बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरे ९२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क Arthabyapar.com || Point Media Pvt. Ltd.
जीवन बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरे ९२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क
२१ चैत / अर्थ र व्यापार – सञ्चालनमा रहेका १९ जीवन बीमा कम्पनीले फागुन महिनासम्ममा ९२ अर्ब २० करोड ३९ लाख २० हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
चालु आवको वितेका आठ महिनामा संकलन भएको सो रकम गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा संकलन भएको बीमाशुल्कको तुलनामा १२ दशमलब १७ प्रतिशतले बढी हो । यस अवधिमा प्रथम बीमा शुल्क मात्रै २५ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । नविकरण बीमा शुल्क ६६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ छ ।
गत आर्थिक वर्षको फागनु मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ८२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । बैंकिंङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावकाबीच पनि जीवन बीमा कम्पनीहरूको बीमाशुल्क संकलनमा भने आकर्षक बढोत्तरी देखिएको छ ।
२०७८ सालको फागुन महिनामा मात्रै जीवन बीमा कम्पनीहरुले २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क र ८ अर्ब १ करोड ९८ लाख रूपैयाँ नविकरण बीमाशुल्क गरि कुल १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये १८ वटाले बीमा शुल्क संकलन बढाउँदा गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको भने घटेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रतिशतले व्यवसाय बढाएको सन नेपाल लाइफको सर्वाधिक ९३ दशमलब २० प्रतिशतले बीमाशुल्क संकलन बढेको छ । यसैगरि,गुराँस लाइफको २२ प्रतिशतले घटेको छ ।
सिटिजन्स लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ, रिलायबल नेपाल लाइफ, प्रभु इन्स्योरेन्स र आइएमई लाइफले गत फागुनको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी व्यवसाय बढाएका छन् । यस्तै प्राइम, सानिमा, युनियन, ज्योति, नेशनल र एशियन लाइफको पनि दोहोरो प्रतिशतले बीमाशुल्क संकलन बढेको छ । सूर्या, रिलायन्स, नेपाल लाइफ, राष्ट्रिय बीमा, एनआईसी, मेट लाइफको बीमाशुल्क संकलन सिंगल डिजिटमा बढेको छ । सबैभन्दा थोरै बढेको मेट लाइफको १ दशमलब ७९ प्रतिशतले बढाएको छ ।
१. नेपाल लाइफः २३ अर्ब ९३ करोड १२ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क १९ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमा शुल्क ४ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ)
२. लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनः ११ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ९ अर्ब ४२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमा शुल्क १ अर्ब ६९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ)
३. नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सः ९ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ६ अर्ब १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क २ करोड ८४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ)
४. राष्ट्रिय बीमा संस्थानः ६ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ५ अर्ब ९७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क ७० करोड ५८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ)
५. युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सः ५ अर्ब ५८ करोड २१ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ३ अर्ब ९८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ)
६. एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सः ४ अर्ब ५४ करोड २७ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ३ अर्ब २४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क १ अर्ब २९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ)
७. मेट लाइफ इन्स्योरेन्सः ३ अर्ब ५७ करोड २९ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क २ अर्ब ५६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क १ अर्ब ६६ लाख रुपैयाँ)
८. सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सः ३ अर्ब ४८ करोड १८ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क १ अर्ब ६३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क १ अर्ब ८४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ)
९. प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सः ३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क २ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क ८६ करोड १७ लाख २९ हजार रुपैयाँ)
१०. सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सः ३ अर्ब २२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क २ अर्ब २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क १ अर्ब २० करोड २९ लाख रुपैयाँ)
११. सन नेपाल लाइफः २ अर्ब ७२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ५ अर्ब ९७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क ७० करोड ५८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ)
१२. रिलायबल नेपाल इन्स्योरेन्सः २ अर्ब ६६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ९८ करोड १५ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क १ अर्ब ६८ करोड ७६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ)
१३. ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सः २ अर्ब ३४ करोड १० लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क १ अर्ब २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क १ अर्ब १२ करोड ३४ लाख ४० हजार रुपैयाँ)
१४. आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सः २ अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क १ अर्ब २६ करोड ८ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क ८८ करोड ३३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ)
१५. गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सः २ अर्ब ८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क १ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क ४५ करोड ४१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ)
१६. रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सः १ अर्ब ८६ करोड ११ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ५ अर्ब ९७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क ७० करोड ५८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ)
१७. सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सः १ अर्ब ५३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ७९ करोड ६७ लाख १३ हजार रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क ७४ करोड १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ)
१८. प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सः १ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ६२ करोड ९१ लख ८८ हजार रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क ६९ करोड ६६ लाख १६ हजार रुपैयाँ)
१९. महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सः ९३ करोड २९ लाख रुपैयाँ (नविकरण बीमा शुल्क ४५ करोड ५२ लाख २९ हजार रुपैयाँ, प्रथम बीमाशुल्क ४७ करोड ७७ लाख ६ हजार रुपैयाँ)